काठमाडौं । शिशु जन्मिँदा परिवारमा खुसी छाउने गर्छ । अझ एकसाथ दुई बच्चा जन्मिँदा त्यस्तो खुसी दोब्बर हुन्छ । जुम्ल्याहा बच्चा हुनुका धेरै कारण हुन्छन् । विस्तृतमा
एजेन्सी । सबै मानिसहरु प्रायः स्लिम बडी चाहन्छन् । उनीहरु आफ्नो मोटाई घटाउनका लागि सकेसम्मका सबै कोसिस गरिरहेका हुन्छन् र पनि तौलमा कुनै पनि फरकपन आउदैन । तर काँचो केरामा प्रचुर मात्रामा हुने फाइबर्सले अनावश्यक फ्याट सेल्स र अशुद्धतालाई सफा गर्नमा मद्दत गर्दछ ।
के बासी रोटी खाँदा शरिरलाई फाइदा पुर्याउँछ त ?
एजेन्सी । बासी रोटीलाई लामो समयसम्म राख्नाले यसमा ब्याक्टेरिया उत्पन्न हुने गर्दछ । जुन हाम्रो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने गर्दछ । यसले कयौँ प्रकारका शारीरिक बिमारीबाट बचाउनका लागि मद्दत गर्ने गर्दछ ।
यी व्यक्तिहरुलाई हर्ट अट्याक हुने सम्भावना अधिक हुन्छ
एजेन्सी । जुन मानिसहरुमा फ्याट बढी हुने गर्दछ, उनीहरुमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्टेलको आशंका बढी हुने गर्दछ । त्यस्ता मानिसहरुमा हृदयघातको सम्भावना पनि उच्च हुने गर्दछ ।
यस्तो छ भागवत गीताको सार
काठमाडौँ । हिन्दुहरुको सबैभन्दा महत्वपुर्ण धर्मग्रन्थ भागवत गीता हो । यो अनुमानत आज भन्दा लगभग ५००० हजार वर्ष पहिला अर्थात कलियुगको आरम्भमा कुरुक्षेत्र नामको युद्ध भूमिमा कृष्णले गीताको उपदेश अर्जुनलाई दिएको बताइन्छ ।
यस्तो रहेको छ शनिबारको तपाईको भाग्य– असोज ११ गते
वि.सं.२०७६ साल असोज ११ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०१९ सेप्टेम्बर २८ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४१ । आश्विन कृष्णपक्ष । तिथि औंशी, ४८ घडी ०८ पला,रातको १२ बजेर २२ मिनेट उप्रान्त प्रतिपदा । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ५४ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ५२ मिनेट ।
प्रोटिनको श्रोत टुसा उमारिएको गेडागुडी !
साडीमा राम्री देखिन के गर्ने ?
आलस खानुहोस् मोटोपनबाट छुट्कारा पाउनुहोस्
एजेन्सी । आलसको बीजबाट बनेको काढा नियमित रुपमा सेवन गर्नाले कयौँ बिमारीको नियन्त्रणका लागि मद्दत पुग्ने गर्दछ । यसको सेवनले शरिरमा रहेको बिशाक्त पदार्थ हटाई मानिसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने गर्दछ ।
प्लास्टिकको बोतलको पानी पिउदाँ हुनसक्छ ज्यान जानसक्ने खतरा !
एजेन्सी । के तपाईलाई थाहा छ प्लास्टिकको बोतलको पानी पिउदाँ हुनसक्छ ज्यान जानसक्ने खतरा । वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानका आधारमा भने, यदि कसैले प्लास्टिकको बोतलमा पानी पिउँछ भने उसलाई अटिज्म, मधुमेह र क्यान्सर जस्ता कयौँ खतरनाक बिमारी हुनसक्ने सम्भावना बढ्ने गर्दछ ।